Al-Zawahiri oo si buuxda loogu caleemo saaray hogaamiyaha Al-Qaacida (Sawiro) – SBC
Al-Zawahiri oo si buuxda loogu caleemo saaray hogaamiyaha Al-Qaacida (Sawiro)
Shabakada Al-Qacida ee sida weyn dagaalka uu ugula dhaxeeyo Mareykanka & xulufadiisa ayaa lix todobaad oo wadatashi aan loo kala kicin waxay ku dhawaaqeen hogaamiyaha rasmiga ah ee badalaya Cusaama Bin Ladin oo ahaa hogaamiyihii kooxdaasi.
Dr. Ayman al-Zawahri ayaa noqdey hogaamiyaha Al-Qaacida, isagoo wixii xiligan dambeeya si toos ah u hagi doono hawlada kooxda oo ay ugu muhiimsan tahay sidii loo qaadi lahaa weeraro aargoosi ah oo ku jihaysan Mareykanka ka dib dilkii Cusaama Bin ladin.
Magacaabista Ayman waxaa lagu xaqiijiyey fariin lagu baahiyey Internet-ka gaar ahaan shabakad ay adeegsato Al-Qaacida, waxaana la sheegay in magacaabistu ay timid ka dib markii ay go’aan qaateen golaha hogaaminta Al-Qaacida.
Al-Zawahiri wixii xiligan ka dambeeya ma noqon doono hogaamiyaha Al-Qaacida ee waxaa kale oo uu toos u noqonaysaa bartilmaameedka Mareykanka & Isbahaysigiisa iyagoo ka dhigtey ninka koowaad ee la beegsanayo maadama laga saarey liiska dadka loogu raadinta badan yahay Cusaama Bin Ladin oo la diley.
Ku dhawaaqista Zawahiri in uu noqonayo hogaamiyaha Al-Qaacida waxay ku soo aaday maalmo yar ka dib markii uu soo saarey cajalad video ah oo uu ku jeediyey hanjabaad ka dhan ah Mareykanka isagoo tibaaxay in dhacdo la mid ah “Talaadadii madoobeyd”- oraah ay Al-Qaacida u adeegsato weeraradii 11.September 2001-dii.
Su’aasha ilaa iyo hada la iswaydiinayo ayaa ah Zawahiri ma isku hayn doonaa sidii Cusaama Bin Ladin uu iskugu hayey Al-Qaacida aduunka ku kala firirsan gaar ahaan Aasiya & Bariga dhexe.
Kooxaha mukhaabaraadka ayaa rumaysan in Yemen ay noqon karto hoyga Al-Qaacida, iyagoo sidoo kale meesha aan ka saarin Soomaaliya & waliba goobaha ay haatan ku xoogan tahay ee buuraleyda Afgaanistan & Pakistan.
Naceybka Mareykanka & Yuhuuda
Zawahiri naceybka Mareykanka & Yuhuuda uu u qabo ma ahan mid cusub mudo sanooyin ah ayuu muxaaradooyinka & hadalada uu jeediyo wuxuu ku xusi jirey sida ay u banaantahay dilka dadka Mareykanka & Yuhuuda, isagoo fikridihiisa si weyn quluubta ugu shubay dhalinyaro fara badan, waxaa jira warar dhanka sirdoonka oo sheegay in uu kaalin weyn ku lahaa qorsheyntii weeraradii September 11,
“Waxaan idinkula dardaarmayaa, oo idiin sheegayaa in Mareykanka & Yuhuuda aad laysaan, la yaab ma ahan inaan idinka dhaadhicyo dilkooda, in la dilana ma ahan la yaab, hadii lagu dilo xabad, hadii toorey la daro, hadii bam ama duqeyn lagu dilo, laakiin waa inay ahataan mid aad u kulul sida bir kulul” ayuu ku yiri fariin qoraal ah oo uu soo saarey 2001-dii.
Mowqifka Mareykanka ee Zawahri
Admiral Mike Mullen oo ah taliyaha guud ee ciiamada Mareykanka wuxuu si cad u sheegay in Zawahri uu baaqi ku yahay liiska maleeshiyaadka Mareykanku doon doonayo, “Isaga (Zawahri) iyo ururkiisuba wali way noo hanjabayaan, sidii aan u baadi goobaynay uguna guuleysan dilka Bin Ladin, xaqiiqdii si mid la mid ah ayaan ka qaadi doonaa Zawahri,” ayuu yiri Mullen oo saxafiyiin kula hadlayey magaalada Washington.
Dabeecadaha Cusamaa & Zawahiri
Wariye Baker Atyani oo ka tirsan TV-ga MBC oo goob ku dhaw magaalada Kandahar kula kulmay Cusaama & Zawahiri June 2001-dii wuxuu ka hadley sida uu arko dhaqanka labadooda wuxuuna yiri “Bin ladin waa nin aad u degan, ereyada uu leeyahayna waa kuwa xisaaban, laakiin Zawahiri wuxuu jecelyahay in uu sheekeeyo, kula murmo ama uu kula sheekeysto”.
Carada shakhsi ee Ayman ee Mareykanka
Carada Zawahiri u qabo Mareykanka ee ah fikirka Al-Qaacida isaga waxaa u sii dheer arin shakhsi oo ah nolashiisa gaarka ah, xaaskiisii & laba ilmood oo uu dhaley ayaa lagu diley duulaankii Mareykanku ku qaadey wadanka Afgaansitan ka dib weeraradii 11-kii September.
Halka uu ku sugan yahay & fursad in la qabto Zawahiri
Ahmed Rashid oo ah qoraa buugag fara badan oo uu kaga hadley maleeshiyaadka wuxuu rumaysan yahay in Zawahiri aanu xiligan ku nooleyn dhulka buuraleyda ee xuduuda Pakistan & Afgaanistan, isagoo ka shidaal qaadanaya dilkii 2-dii bishii May loogu geystey Cusama Bin Ladin guri ku yaal magaalada Abbottabad ee dalka Pakistan, halkaasi oo aan laga fileyn.
“Xuduudo xiligan waa meel aad ugu qatar badan qof kasta” ayuu yiri Rashid, waxaana jira shaki ah in Zawahiri uu ku sugan yahay deegaan qabaa’il.
Ka dib dilkii lama filaanka ahaa ee Mareykanku ku dileen hogaamiyihii Al-Qaacida Cusama Bin Ladin waxaa sii xumaanaya xiriirka Mareykanak & Pakistan, iyadoo dawlada Paksitan ay caro ka qaaday sababta Mareykanku isagoon soo wargalin uu dalkeeda gudihiisa weerar uga fuliyey, waxaana dhawaan xabsiga la dhigay oo ay xireen ciidamada sirdoonka Pakistaan shan qof oo Mareykanka kala shaqeeyey jaajuusida Bin Ladin & waliba weerarka lagu diley.
Diblumaasiyiin ayaa qaba in dadaalada qabashada Zawahiri ay araxda ka jabisey khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhaxeeya Pakistan & Mareykanka, saraakiisha Pakistan waxay doonayaan in CIA-da Mareykanku ay joojiyaan weerarada xaga cirka ee ay fuliyaan diyaaradaha la hago ee duuliye la’aanta ah.
Wargeyska Washington Post wuxuu daabacay xog ku aadan in albaabada la isagu dhuftey xarumo CIA-da Mareykanku ku lahaayeen gudaha Pakistan, kuwaasi oo ciidamada sirdoonka Pakistan ee loo yaqaan ISI & CIA-du ku kala qaadan jireen macluumaad muhiim ah.